waa qisadii cawil iyo hibaaq qeybteedii 2aad | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
waa qisadii cawil iyo hibaaq qeybteedii 2aad
Hibaaq waxay ka soo baxday qolalkii mid ka mid ah. Waxay xidhnayd garays Iliindi ah, garbasaarna way hagoognayd. Waxay ahayd gabadh joog iyo jamaalba leh. Intay yare dheerayd bay haddana jalaqsanayd. Iyadoo dhoollacaddaysa ayey dhankii Cawil u soo dhaqaaqday.
“Ahlaan wasahlan Hibaaq!” ayuu Cawil gabadhii si dhiirran ugu salaamay. “Nabad walaaleh,” ayey Hibaaq debecsani ugu tiri. “Cawil,” ayuu ku yiri intuu salaan u soo taagay. Way ka qaadday. “Waxaan u malaynayaa in aan hore u kullanay, mase garanayo meeshay ahayd kolley wejigaagu waa igu yaallaa.” Intay Hibaaq ilko aad u cadcad daaha ka qaadday bay tiri, “Waa laga yaabaa in aan hore isu aragnay. Wax qabow miyaan kuu keenaa mise shaah baan kuu kariyaa?” “Hadba kaad ii garato. Wax qabow baase kuu dhib yar baan u maleynayaa.” “Haddaba hays martiyeynin minanka minankaagii waayee,” bay tiri iyadoo jikada u sii socota. Markay cabbitaankii u keentay ayey Hibaaq inankii xoogaa fadhiga ugu sii sheekaysay. Way is wareysteen oo isu xog-warrameen. Hibaaq waxay wax ka baranaysay Jaamicadda Toronto, gelinna waxay ka shaqaynaysay dukaan dharka lagu iibiyo oo beledka hoose ku yaal. Waxay uga warrantay sida uu waqtigeedu ciriiriga u yahay oo aanay nafis uga helin howl-maalmeedkeeda. “Dhowaan bay imtixaannadii ii dhammaadeen, waana ilaahay mahaddii wax duruus ah la iguma lahan.” Markuu Cawil sii baxaayey bay Hibaaq sii dhoweysay. Waxay la tagtay ilaa halkii gawaarida la dhigan jiray. Gaarigii Cawil ma oollin halkii uu kaga tegay. Hareeruhuu ka dayey isagoo fahamsan in uu meel khalad ah uga tegay oo laga jiitay. “Abaayo halkanaan dhigtay, waxaanan filayaa in la iga jiitay,” buu Cawil gabadhii ku yiri. Welwelka Cawil way dareentay gabadhu inkastoo uu ka qarinaayey. Si deggan bay Hibaaq ugu tiri, “Waan ka xumahay aboowe, hase ahaatee waxba ha ka welwelin anigaa kula doonayee.” Intay ka codsatay in uu sii sugo ayey gurigii ku laabatay. Daqiiqado ka dib bay soo noqotay iyadoo fureyaal wadata markaasay ku tiri, “Ina keen anigaa ku geynaya meeshii aad doontee.” Gaariga Hibaaq wuxuu ahaa mid yar oo noocyada Jabaanka ah. Markii ay gudaha gashay bay albaabka ka furtay. Waxay ku soo dhaqaaqeen waddadii, welise Cawil wax hadal ah kama aanu soo bixin. Intay soo yara jalleecday bay ku tiri, “Waxaasoo dhan hooyaday baa kuugu wacnayd. Hadday aniga i sugi lahayd tani kuguma dhacdeen.” Cawil intuu soo baraarugay buu ku yiri, “Waxaa ii qornayd in aan adiga maanta ku barto. Taas baan isku madaddaalinayaa, waana mid u qalanta wixii iga soo gaara oo kale.” Gabadhu intay isku yare xishootay bay hoos u tiri. “Waad mahadsan tahay.” Hibaaq waxay inankii geysay rug lagu xareeyo gawaarida sharciga jebiya ee boliisku soo qabto ama la jiito. Waxaa Cawil laga qaaday lacag ganaax ah intii aanan loo fasaxin in uu baabuurkiisa la baxo. “Hibaaq aad iyo aad baad u mahadsan tahay,” ayuu gabadhii ku yiri. “Howl badan baad iga furatay, waxaanse jeclaan lahaa in aan mar kale kulanno iyadoo qalalaase kale aanu inagu jirin.” “Waxba kama qabo,” ayey tiri iyadoo xishoodna indhaha ka dadbaysa. “Ka warran haddii aan ku soo waco si aanu waqtiga isula garanno?” Markay taleefoonnadii kala qorteen bay kala tegeen. Cawil ugu dambayntii waxay u ahayd guul iyo rajo cusub oo ku soo korortay la kulanka gabadh Soomaali ah. –oo00oo– Maalintii ballantooda oo uu Cawil aad u dharersanaayey ayaa la soo gaaray. Waxay ahayd Sabti uu shaqadana ka nasanaayey. Wuxuu duhurkii tegay timajare halkaasoo inta timahana loo soo hagaajiyey garkii iyo shaarubkii toddobaadkaas ku baxayna looga soo xiiray. Gaarigiisii buu soo dhaqday, shidaal badanna ku soo shubtay. Markii uu gurigiisii ku soo noqday buu haddana qubaystay. Wuxuu ku soo lebistay jubbad, surwaal madow, shaar cad, dhuunqabad midabbo leh, iyo kabo madow oo aad u dhallaalaya. Wax ka dhinnaa ma lahayn markuu ugu dambeyntii barafuunkiina isku soo buufiyey. Firaaqada Hibaaq oo aad u adkayd bay aawadeed ku ballameen beledka hoose in ay isugu yimaadaan marka ay gabadhu shaqadeeda soo dhameysato. Hase ahaatee, waxay Hibaaq goobtii timid iyadoo aanay daal iyo dacdarro ka muuqan. Jooggeeda dheer bay aawadeed soo xiratay kabo madmadow oo gaaban. Waxay ku lebisnayd cambuur dheer oo madow, boorso u egna garabkeeday ka lulatay. Timaheedii dhaadheeraa gadaal bay u sii daysnaayeen iyagoo foolkana ku jaran, dhexdana waxa ugu giijisnaa suun dahabi ah oo si u shabbahay midabka timaheeda. Farxad bay la dhoollacaddaysay markay Cawil oo daqiiqado ka soo horreeyey aragtay. “Waan ku faraxsanahay aragtidaadan qaayaha badan,” buu Cawil ku yiri. “Miyaan kugu soo daahay?” bay su’aashay. “Maya,” ayuu ku jawaabay. Waxay halkii ka sii aadeen makhaayad yar oo bilicsan oo uu Cawil hore miis uga sii carbuuntay. Markii soorehii uu miiskoodii keenay buu intaanu fariisan Cawil gabadha kursigeedii u qaabeeyey. Cabbaar bay is hor fadhiyeen oo midba kan kale daymada ku xadaayey. Dhiirranaan buu xoogaa ugu daahay daawashada wejigii gabadha. Niyadduu ka yiri, tani waa mid kala xiran. Hibaaq markay aragtay bay xishood dartii dhanka kale uga jeesatay, isaguna isagoo dhoollacaddaynaya una bogay fallaaraha dareenka ee dhexdooda isdhaafaya ayuu isaga negaaday. “Aboowe wax yar iga raalli ahow,” bay Hibaaq tiri intay sare u kacday. Wuu istaagay intay sii baxaysay, waxaanay gabadhii u dhaqaaqday qolalkii kortagga. Markay Hibaaq soo noqotay, ayey xoogaa sheeko guud isku madaddaaliyeen intii dalabkooda looga keenaayey. Waxay ahayd maqaayad Carbeed oo ku caan ah cuntooyinka Bariga Dhexe. “Hibaaqeey waxaan ku su’aalay, ma jiraa qof ay sheeko idinka dhaxayso?” ayuu Cawil su’aalay markii macmacaankii ugu dambeeyey loo keenay. “Maya sababtoo ah shaqada, iskuulka iyo howlaha guriga ayaaba aniga iga adag.” “Waxaan danaynayaa in aan barashadeenna iyo sheekada dhexdeena aan sii wadno iyadoo aanay khilaafin howlahaaga kale. Maxay kula tahay?” “Ma xuma ayaan u malaynayaa.” Markii hore waxay ku talagalsanaayeen in ay shineemana sii galaan, balse sheekadii baa isugu baxday oo kaga maarmeen maaweelo kale. “Cawilow, waxaan kaa codsanayaa, haddii aad doonayso in uu xiriirkeennu sii jiro in aad marnaba been ii sheegin,” ayey tiri Hibaaq. Markan waxaa u yaallay labo koob oo shaah ah. “Maxaad ka waddaa beenta aan kuu sheegayo?” ayaa Cawil su’aalay, intuu miiska dhigay koob gacanta uu ku sitay. “In aad gabdho kale igu dul wadato iyo waxyaabo la mid ah.” “Macnaha ma in ay sheekadu inagu koobnaato mise waad ka hinaasaysaa?” “Intaba. Aniga laftaydaa taas kuu ballanqaadi lahaa.” “Hagaag. Waa ballan, beenna kuu sheegi maayo.” “Haddaba ma jirtaa mid kale oo aad sidayda wada sheekaysataan?” “Maya, ma jirto gabar kale oo ay sheekadeennoo kale inaga dhaxayso,” buu Cawil yiri. Mahad badan buu ku qabay in uu baadidoonkiisu dhammaaday uuna ka raystay wareegiisii habeen iyo maalin uu magaalada meereysan jiray si uu mid iyada oo kale ah ula kulmo. In yar buu inta hakaday ku daray, “Ma jirtaa wax kaloo dheeraad ah oo aad i waydiinayso?” “Haa.” “Soo daa haddaba.” “Waxaan rabaa in aan ogaado waddada uu xiriirkayagu ku socdo.” “Waxaan doonayaa in uu noqdo mid waara oo weligiis jira. Adigase maxay kula tahay?” “Waan kugu raacsanahay.” “Haddaba ma waxaad doonaysaa in aan dedejinno mise in aan marka hore is dabeecad baranno, kadibna aan aayihiisa ka tashanno?” ayuu weydiiyey Cawil. Koobkiisii buu haddana qaatay oo kabbaday. “In aan marka hore si fiican isu baranno ayaa ila door roon.” “Sidaa aawadeed, taladaadaa jirta, aniguna waan kugu raacay ee ka warran?” Goor dambe oo la xiri lahaa ayey ka soo tegeen maqaayaddii. Markuu gurigeedii keenay oo ay degaysay ayuu Cawil inta ka hor degay gaariga albaabkiisa ka furay. Xushmayn iyo ikhyaarnimo ulama aanu kala harin aan ka ahayn in uu ubax guddoonsiiyo markii ay timid. Niyadda ayuu isagoo isguubaabinaaya iska yiri, Markan marka xiga. Wuxuu u sii dhoweeyey gurigeedii, wuxuuna ku hubsaday wiishkii dabaqeeda u qaadi lahaa. “Hurdo caafimaad leh ayaan kuu rajeeyey,” buu ku yiri. “Anigana sidoo kale. Waadna ku mahadsan tahay habeenka caawa ah ee wanaagga badan.” Iyadoo gacanta u haadinaysa ayey ka sii dhaqaaqday, nabadgelyona u sii rajaysay. “Nabadgelyo,” ayuu ku yiri cod gaaban oo uu ka shakiyey in ay gabadhu maqashay. Mar kale ayuu sare ugu dhawaaqay. Wuxuu ka soo dhaqaaqay iyadoo mar kale gacanta u haadinaysa. –oo00oo– Cawil markuu gurigiisii ku soo noqday habeenkaas, daqiiqado ka dib isagoon dharkaba iska beddelin ayaa talefoon u soo dhacay. Wuu qabtay, waxaanay ahayd Hibaaq. “Haye Hibaaq…” “Waxaan hubsanaayey in aad xaafaddaadii nabad tagtay,” ayey ku tiri intii aanu hadalkiisii dhammaysan. Dareen naxariiseed baa Cawil durbadiiba jirkiisa dubaaxshay. Waxay ugu horreysay gabadh sidaa ula dhaqanta. Intuu kursi hoostiisa yaallay ku fariistay ayuu ku yiri, “Waad mahadsan tahay, macaan. Waan nabad imid xaafaddaydii.” “Aboowe,” ayey tiri Hibaaq, “Waxaan kaloo doonayaa in aan kuu sheego in aad Jimcaha aniga ii casuman tahay haddii aad firaaqo tahay.” “Waxba kama qabo, laakiin maxaad isu dhibaysaa?” “Waxaa talada arrintan leh hooyo oo waxay iga codsatay in aan ku casuumo. Haatanse yaanan waqtiga kaa qaadine, nabadey. Hurdo caafimaad leh baan kuu rajaynayaa” Markay mar kale is macsalaameeyeen ayuu Cawil dib uga fikiray arrimihii uu Hibaaq kala kulmay. Wuxuu isu barbardhigay ballantiisii ugu dambeysay ee Hani iyo tan habeenkaas ee Hibaaq. Isagoo mowjaddaas ku jira baa waxaa mar kale yeeray da****ii taleefonka. Markan waxay ahayd Hani. “Ii warran Cawilow, sow nabad maaha?” ayey Hani ku tiri. “Nabad walaal,” ayuu yiri, wuxuuna la yaabay sida uu niyadda ugu haayey iyo maqalka codka gabadha ee isla kulmay. “Caawa oo dhan baan ku soo wacaayey, waan ka xumahay in ay goor dambe tahay,” ayey ku tiri. Isagoo dhoollacadeynaya ayuu ku yiri, “Macna malahan, dhowaan baan laftaydu soo galay.” Intay xoogaa ka hakatay bay tiri, “Waxaan kuu soo wacay in aan kaa raalli geliyo sidaan habeenkii dhowayd kaaga soo tegay. Waxaa aad iiga hor yimid wiilasha waayadaan …” “Waan ku fahamsanahay,” ayuu yiri Cawil isagoo hadalkeedii barjaray. “Raalli baan kaa ahay, garna waad u leedahay in aad samayso wixii kula gudboonaaday. Waxaan kuu sheegayaa in uu baadigoobkaygii soo idlaaday. Aad baad ugu mahadsan tahay raalligelintaadan, waanan kaa guddoomay …
Comment by cawil44 on December 29, 2009 6:55 pm
jaceyl dhab miyaa mise wa dhalanteyd Qiso Dhab ah oo ka dhacdey Jabuuti: Waayaha Jacaylkiyo Jaandaramarigga Jabuuti